IELTS - GETC English Training Centre
TIMETABLE – CENTRE (11)
Level Introduction, Foundation & Preparation
Duration 80 ~ 120 hours/ Level
Minimum Level Elementary
Course Length2~3Months
Date Monthly Start Date
Course Fees 150,000Ks
Material fees 10,000 Ks ~ 20,000 Ks
Location Centre-1, Center-3
Further study သွားမည့်သူများနှင့် Oversea Collage/ University ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုမည့်သူများ၊ အင်္ဂလိပ်စာ4Skills ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်လိုသူများနှင့်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အဆင့်ရရှိထားသူများ၊ oversea collage/ University ကောင်းကောင်းတွင် ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုပြီး တက်ရောက်ချင်သူများ။ IELTS စာမေးပွဲမဖြေလျှင်တောင်
Academic language ကို ကျွမ်းကျင်စွာသုံးတတ်လာပြီး မိမိကိုယ်တိုင် report များကို ပိုင်နိုင်စွာရေးတတ်လာချင်သူများအတွက် အထူးပြု ဖွင့်လှစ်ပေးထားသော အတန်းဖြစ်ပါသည်။
IELTSဖြေဆိုရာတွင် မသိမဖြစ်သိရှိရမည့် Exam Tips and Strategies ကို အဓိကထားသင်ကြားပေးမည့်အပြင် ExamSkills နှင့် Study skill ပါ ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးပါမည်။Exam ဖြေဆိုရာတွင် လွယ်ကူထိရောက်မည့် techniques များ၊ အမှတ်ကောင်းကောင်းရမည့် နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပြီး သင်ကြားပေးပါမည်။
Band ကောင်းကောင်းနှင့် အောင်ချက်အကောင်းဆုံး ရလဒ် ရရှိပါမည်။
← Communicative English IV	General English →
: No.18, Myaynu Street, Myaynigone,Sanchaung Township, Yangon.
: 01-537895, 09-263337703
: GETC-Nurture HO
Copyright © 2005~2019 - All rights reserved by
သင်တန်းအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုသူများအတွက် အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ မြို့နယ် များအား ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ပေးပါ။ Customer Service Team မှ ပြန်လည် ဆက်သွက်၍ သင်တန်းအကြောင်း အသေးစိတ်ရှင်းပြ ပေးပါမည်။
စုံစမ်းသိရှိလိုသောသင်တန်းအမည် (Interest Class) *
COOPERATE TRAINING	COMMUNICATIVE ENGLISH I	COMMUNICATIVE ENGLISH II	COMMUNICATIVE ENGLISH III	COMMUNICATIVE ENGLISH IV	IELTS	GENERAL ENGLISH	BUSINESS ENGLISH	SUMMER ENGLISH PROGRAM	CAMBRIDGE EXAM	WEEKEND ENGLISH PROGRAM	GRAMMAR & VOCABULARY
Children Name *
Parent Phone No. *
Children Age *
---	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Interest Centre *
---	Hlaing Centre	Sanchaung Centre	Tarmwe Centre	Insein Centre	North-Dagon Centre	Tharkayta Centre	Lanmadaw Centre